Jowhar.com : Somali Leader News - News: Guddoomiyihii degmada Kaaraan oo wareejiyay xilka guddoomiyanimada degmadaas
April 25 2014 07:58:05
Guddoomiyihii degmada Kaaraan oo wareejiyay xilka guddoomiyanimada degmadaas
Guddoomiyihii hore ee degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa maanta ku wareejiyay xilka guddoomiyanimada guddoomiyaha cusub ee uu soo magacaabay dhowaan duqa magaalada Muqdisho.
Munaasabad kooban oo xilka lagu kala wareegayay ayaa waxaa ka qeybgalay Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ahna duqa Magaalada Muqdisho Ganeraala Xasan Maxamad xuseen� muungaab� iyo saraakiil kale oo ka tirsan maamulka gobolka Banaadir.
Xilwareejinta uu sameeyay guddoomiyihii degmada Kaaraan ayaa ka dambaysay kadib markii saaka ay ciidamo hubeysan ay la wareegeen saldhigga iyo xarunta maamulka degmada Kaaraan. Guddoomiyihi hore ee degmada Kaaraan ayaa waxa uu ka codsaday shacabka degmada Kaaraan inay la shaqeeyaan guddoomiyaha cusub ee la soo magacaabay.
Hore ayaa qaar ka mid ah guddoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir xilka looga qaaday hase yeeshee guddoomiyaha degmada kaaraan ayaa wararka ay sheegayaan in laga dareemay inuu isku dhejinayo xilka maamulka degmada Kaaraan. Somali news leader
0 Comments · 2969 Reads
Jowhar.com756,062 unique visits